မှန်ကန်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးချက် (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
မကြာသေးမီကလူငယ်တစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဖိုရမ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင်ကျွန်ုပ်စပိန်နိုင်ငံသည်ကလေးငယ်များအားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလူသိရှင်ကြားမြှင့်တင်ပေးနေသည်အပျော်အပါးသင့်ကိုယ်ပိုင်လက်၌ရှိ၏"မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ မကြာသေးမီကဗြိတိန်အမျိုးသားကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနကအလားတူမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။တစ်အော်ဂဇင်တဲ့နေ့ကသွားဆရာဝန်စောင့်ရှောက်။ " ကောင်းစွာရည်ရွယ်ထားသော်လည်းထိုသို့သောကြိုးပမ်းမှုများသည်မှန်ပါသလော။
အမှန်မှာအော်ဂဇင်ဆိုင်ရာအပျော်အပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်၌မဟုတ်ချေ။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ငါတို့၌ရှိသည် ဦးနှောက်neurochemical ပြီးတော့ Activision နေတာများဖွရလဒ်။ သူတို့ကိုမရှိရင်အော်ဂဇင် burping ထက်မပိုအမှတ်ရစရာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစံပြတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြံဉာဏ်ကိုရောက်ရှိလာသောများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအတွက် အတိတ် post ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကြိမ်နှုန်းကျဆင်းခြင်းသည်မမျှော်လင့်ဘဲယုံကြည်မှု၊ လူမှုရေးစွမ်းရည်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကိုမည်သို့မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများဝေမျှခဲ့သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်ပြောပြခဲ့သည်။ ဒီ post မှာတော့လေးလံသောအရှက်ကင်းမဲ့သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဘာကြောင့်များအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာလဲကဲ့သို့သော ticking ဗုံးတစ်လုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မည်။
1 ။ စက်လှေကားမထင်မှတ်ဖွယ်အန္တရာယ်
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်သော်လည်းအော်ဂဇင်ကိုအလွယ်တကူအလျင်အမြန်တိုးပွားစေနိုင်သည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှိုးဆွမှုသည်မကြာခဏသို့မဟုတ်ပြင်းထန်လျှင်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောပြင်းထန်မှု၏ဥပမာများမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အတူခြိမ်းခြောက်မှုများသို့မဟုတ်“ ငရဲသို့သွားလိမ့်မည်” သို့မဟုတ်ယနေ့အစွန်းရောက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပုံမှန်ပြင်းထန်မှုသည်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အတုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသွင်းစရာမလိုဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် (ဤသည်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အပြစ်မဲ့မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမှမည်သည့်အခါမျှအနိုင်ကျင့်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်မဖြစ်နိုင်ပါ။ )
orgasm မယ့်တစ်ဦးထုတ်လုပ်နိုင်သည် မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့ဒါပေမယ့်လည်း neurochemical ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ ဦးနှောက် homeostasis ပြန်လည်ရောက်ရှိအဖြစ်။ ဦးနှောက်ကိုပြန်လည်သက်သာအဖြစ်နိမ်အောက်ပိုင်း, အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်း neurochemical စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပေါက်ကွဲမှုပိုမိုအစွမ်းထက်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ပုံစံကိုယူစေခြင်းငှါ တစ်ဦးထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်မတရားသော ဦးနှောက်အတွက်, (ပျော့သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သော) lethargy, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ် (တစ်ကြမ်းတမ်းဘုရားပေါ်သို့ရောက်သောစီမံကိန်းကြောင့်), ဖိနှိပ်သည့်လိင်အတွက်နောင်တ။ အဆိုပါရလဒ်မကြာခဏနဲ့အတူ Self-စေရန်ဆေးတစ်ဦးအလိုဆန္ဒဖြစ်ပါသည် နောက်ထပ် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ များစွာသောသူတို့သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်သည့်စိတ်သဘောထားကိုကာလအတန်ကြာအထိအော်ဂဇင်ကင်းလွတ်သည်အထိမရိပ်မိကြပါ။
ယနေ့ခေတ်တွင်“ လုပ်လေလေ၊ သင်လုပ်လေလေ၊ ပိုမိုကျန်းမာလေလေ” အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်မှားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အစားအစာကိုနှစ်သိမ့်ရန်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသဘာဝကျသောကြောင့်၎င်းအား၎င်း၏အကျိုးဆက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်သာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုပါ။ မိဘများနှင့်ကလေးများအားမဖြစ်မနေအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းတို့၏အန္တရာယ်များအကြောင်းသတိပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့် ဦး နှောက်ယန္တရားသည်အတင်းအကျပ်များအားလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအသင့်အတင့်မပြုလုပ်လိုပါ။
ကလေးငယ်များကိုသူတို့၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားရန်ပြောခြင်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကိုသက်သာစေနိုင်သည်ဟုရှင်းပြခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ မိသားစုဆွေးနွေးမှုများသည် ဦး နှောက်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆုလာဘ်အစီအစဉ်နှင့်၎င်းသည် 'ဟုတ်ကဲ့' အချက်ပြမှုများကိုမည်သို့တောက်ပစေနိုင်ပုံအပေါ်မူတည်သင့်သည်။ သူတို့ကိုသတိရပါ ကြိုးဖြစ်ကြောင်းကြွက်များ ဒါကြောင့်သူတို့အကျိုးကို circuitry (မအနေနဲ့အော်ဂဇင်သလောက်) လှုံ့ဆော်ရန်လီဗာနှိပ်နိုင်မည်နည်း သူတို့ကျဆင်းသွားသည်အထိသူတို့ကလီဗာကိုနှိပ်ပါ။
Freud ကျောင်းသား, Rudolf von မြို့ပြ (လိင်စုံလင်အိမ်ထောင်ရေးအကယ်၍ ကလေးများသည်“ တင်းမာမှုတိုးပွားလာခြင်း” (လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဘယ်သောအခါမျှရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါ) ကိုသတိထားမိပါက၎င်းတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကောင်းဆုံးပမာဏကိုရှာဖွေရန်စိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးသည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍“ ပဉ္စမ” နှင့်“ ကြားနေ” ထက်ဂီယာပိုများသည်။ ကလေးများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကြားကာလတိုးပွားလာခြင်း၊ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုသူတို့၏လမ်းကြောင်းပေါ်သို့မသွားစေခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုအားကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းကြွက်သားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ (လက်ကိုကိုင်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်အတူတကွတွဲလုပ်ခြင်းတို့သည်အလွန်ဖြစ်သည် pair တစုံ-bonder ဦးနှောက်အဘို့အပြော့ ငါတို့ကဲ့သို့ပင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်လျှင်တောင်မှ။ )
သို့သော်တဦးတည်းကပေါ်ပေါက်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်လောင်ကျွမ်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်သောအခါအမြင့်လာနိုငျပုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မပါဘဲလေးတွေထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲပြေးစက်ပေါ်ကိုပစ်ချနိုင်ပါသည်။ သူတို့မလှူသို့ချော်ပြုလျှင်, သူတို့ကချိန်ခွင်လျှာကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်, သို့မဟုတ်တူသောအဘယ်အရာကိုပြန်လည်နာလန်ထူပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။ တကယ်တော့သူတို့ကပင်သူတို့၏အမူအကျင့်ကိုမသိစေခြင်းငှါ is လွန်မိပြီဆိုပါကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော, မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကသူတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တို့တွင်စံဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကီနှင့်ချစ်ပ်တိုင်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဖြစ်သောကြောင့်, သင်သကြားနဲ့အဆီအဘို့သင့်မတရားသောဒါပြင်းထန်သောဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်မေးရန်မစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။
ဒါကအသေးအဖွဲအချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြတ်တောက်ရန်ရွေးချယ်သောအကြီးစားညစ်ညမ်းသူများသည်မကြာခဏအလွန်အမင်းမသက်မသာရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုခံစားကြရသည်။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြောင်းနားမလည်ကြဘူး သာမန်။ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန် (equilibrium restore) အချိန်အတော်အတန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသူတို့မသိပါ။
, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူတို့လိင်ဖိနှိပ်နေအိမ်များမှာကြီးပြင်းခြင်းနှင့် masturbating အကြောင်းကိုမရှက်မခံစားရခဲ့ကြသည်လျှင်ပင်အချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု, အနတ္တ, ယားယံခြင်း, ဦးနှောက်မြူ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပြင်းထန်သောမတရားသောကဲ့သို့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကောက်ချက်ချ, ဒါကြောင့်ထွက်တစ်နည်းနည်းနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုများ၏လုပ်ခများမှာ မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏တစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရလဒ်ထက် ဆန့်ကျင်ဘက်။ အဝိဇ္ဇာဖြတ်တောက်စေသည်ပြန်အန္တရာယ်များတဲ့သင်တန်းနှင့်တူပုံရသည်, ဒါကြောင့်တင်းမာမှုတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာပုံရသည်။
2 ။ မလိုချင်တဲ့သင်ယူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဗီဇကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ an orgasm ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုအစွမ်းထက်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံ အားလုံး ကလေးမွေးခြင်းနှင့်ပင်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်။ ယနေ့ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိကလေးငယ်တစ် ဦး သည်အလွန်အားတက်ကြွစေသောလိင်မှုကိစ္စများစွာတွင်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းသည့် ဦး နှောက်သည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်ရှားရှားပါးပါးမျိုးရိုးဗီဇအရဖြစ်တည်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဆွနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ပိုပြီးတန်ဖိုးအားဖြန့်ချိပို dopamine ဦးနှောက်ဖြစ်ရပ် (s) ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဦးနှောက်ကို ဝါယာကြိုးများအတွေ့အကြုံ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဆိတ်တွေနဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုကြည့်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ခြေလက် ဦး နှောက်ကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားပါ။
ဤသည်အတူတူပင်သင်ယူခြင်း / ဝါယာကြိုးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆိတ် flashbacks ထက်ဆိုးဝါးသောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ တားမြစ်ထားသော” နှင့်“ အပြစ်ရှိသော” (ဆိုလိုသည်မှာအန္တရာယ်များသော) လိင်သည်ဒို့မင် (“ gotta get!”) နှင့် adrenaline (ကြောက်ရွံ့ခြင်း) နှစ်ခုလုံးနှင့် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ခတ်သည်။ ဤသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောသာမန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအမှတ်ရစရာမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောအူရားဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်သည်။ “ အန္တရာယ်များသော” မည်မျှခံစားရသည်ကိုနားလည်ရန်ဖတ်ပါ ရေချိုးခန်းလိင်ပူအဘယ်ကြောင့်သူကပြောင်းလဲပြည်နယ်များအတွက်ညျကွောငျ့, သောယောက်ျားသည်ဗီရိုထဲကဖြစ်ခြင်းညည်းတွား။
ဒီနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုက ဦး နှောက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်။ အစွန်းရောက် porn သည် neurochemical wallop ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမြဲတမ်းဝတ္ထုဖြစ်သည်။ သုတေသနအရ ၀ ယ်လိုအားအသစ်သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (၎င်းသည် slot machine နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများ၏နောက်ကွယ်တွင်လည်းရှိသည်။ ) အကျိုးရလဒ်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆိုင်ရာပြုမူမှုများအားတွန်းလှန်နေရသောယခု neurochemical supranormal မျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ ယခင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သောအိမ်ထောင်စုများမှရှေးရှေးသူများအတွက်သိုလှောင်ထားခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်း။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုယ်တိုင်ကမမှားပေမယ့်ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်မည်သို့လည်းရေတိမ်ပိုင်းအနေနဲ့နားလည်မှုမျှသေးငယ်တဲ့ကြီးကြပ်ဖြစ်ဖို့သက်သေပြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် Wired ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသိလျှင်ကျွန်တော်အရှက်ကွဲခြင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ Self-အနိုင်ယူပြီးစွဲအောင်၏တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် supranormal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအဖြစ်နေရာအနှံ့-ထို့ကြောင့် Over-ဆွလျော့နည်းအမြားအမရအခါယုံကြည်သည်တဲ့အခါဒီအမှား, နားလည်ခဲ့ (Pre-အင်တာနက်က) ။
သို့သော်ယနေ့တွင်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်မရှက်ပါနှင့်” သည်အဖြေများရှာဖွေသောကလေးများအတွက်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ အပြစ်မဲ့ဝယ်ယူခဲ့သည် အလေ့အထများကိုလမျး၌ရနိုင် ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်း၏။ ကဘေးဖယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဌာန်းယူဆချက် set နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်၏အရေးပါမှုကိုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုပြန်ဖွင့်ဖို့အချိန်လား?
nofap ထံမှ Comment
ထားသောပုဝါအတွက်ပစ်ပေမယ့် (nsfw) ငါ့ကိုထွက်ကိုနားထောငျ
အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကမှန်ပါသည်။ မနေ့ကငါအိပ်ရာမှာမိန်းမတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်၊ ဒီခွဲကိန်းထည့်မှုကြောင့်ဒီဟာကနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ လူတိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တာကိုမရပ်တော့ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကကြီးမားပေမယ့်ရက် ၉၀ ကိုငါလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူး။ ငါကြိုးစားပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ယခုငါသိ၏။ porn မပါဘဲရက်ပေါင်းကိုးဆယ်, သေချာပေါက်, ဖြစ်ကောင်း, ဒီအစား - သင်၏အသက်တာ၏ကျန်သောအဘို့အစဉ်အဆက်နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမ porn ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်, အဲဒီလိုပြီးသားပြု၏။ သို့သော်ရက်ပေါင်း ၉၀ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိသလော။ အိုကေ၊ မင်းမှာ ED ရှိရင် အကယ်၍ သင်သည်တကယ့်ကိုလေးနက်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်တစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်သည်။ အအေးကြက်ဆင်ကိုရက် ၉၀ ကြာဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်ငါသာဆိုရင်မင်းငါ့ကိုရက်ငါးရက်အကြာမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာငါပြောပြမယ် .. ငါဟာအမြဲတမ်းစိုက်ထူမှုတစ်ခုနဲ့အတူသွားပြီးအလွန်အမင်းပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာသွေးနည်းလွန်းလို့၊ ငါဘတ်စ်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးနောက်ကွယ်မှာထိုင်နေတဲ့ sexy အသံတစ်ခု (အသံတစ်ခုပဲ!) ကြားလိုက်ရပြီးရုတ်တရက်အရမ်းပြင်းထန်လာတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသတိထားမိမှာကိုစိုးရိမ်တာ၊ အကြှနျုပျ၏ဘောင်းဘီ precum နှင့်ပြည့်ဝရ။ ကျွန်တော့်ဘောလုံးများထိခိုက် ဒီဟာကအလွန်ကောင်းတဲ့ subreddit လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာစံပြ - ရက် ၉၀ ကိုဖြတ်လိုက်တာဟာလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူး။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲဖြတ်တောက်ခြင်းကသင့်ကိုလူတစ်ယောက်အနေနဲ။ လူတိုင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလုံးဝစွန့်ခွာပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာများသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ (စတုတ္ထနေ့ရက်တိုင်းသာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်)
ကြည့်ပါ - အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
မှတ်စု: YBOP သင်တို့အဘို့ဆိုးရွားကြောင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုမမူ ပဲဒါခေါ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ၏များစွာသောအမှတ်အောင် ပြောဆိုထားသည် အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့တကယ်တော့အခြားလူသားမဟုတျဘဲအော်ဂဇင် / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ပိုများသောအထူးအနည်းငယ်အထီးကျန်ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်အော်ဂဇင် (မှန်လျှင်) အကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်ကောင်းသဘာဝကျကျပိုပြီးလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကျန်းမာသန်စွမ်းလူဦးရေကနေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ပြောဆိုထားသည်။ သူတို့ကကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ: